अद्वितीय विभिन्न स्व सन्तुलन स्कूटर - Jomo प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
को Mannequin प्रति मोटर गुणस्तर रूपमा निर्धारण गर्न छ। हो, यो तथापि निर्माण मा एक नजर लिएर, तपाईं मुद्रा को एक धेरै मूल्य जा गर्नुपर्छ, र यो खतरनाक केटा को निर्माण को सरासर गुणस्तर, तपाईं यसलाई लुकाउने मा एक ट्रांसफर्मर छ कि छैन भनेर वा सोच बाँकी हुनुहुन्छ। सजिलै rechargeable, छैन यात्रा एक के गर्ने हामी यी लागि पनि नियन्त्रण गर्न सरल स्केटबोर्ड वा Electric longboard, पेट्रोल नगद बचत सरल Remotes प्रयोग गरेर यो सामान के प्रेम होइन गर्न? यो पाङ्ग्रा खुलेर स्पिन गर्न कारण हुनेछ र मुद्दाहरू तपाईं राउन्ड आफ्नो आत्म वा चोट गर्न हानि गर्न सक्छ। दुई पाङ्ग्रा कहाँ एक गणनामा क्षेत्र पाउन सक्नुहुन्छ तिनीहरू बीच टिकाउ शरीर छ। मुश्किल संभावना सडकमा धक्का नेभिगेट गरिनेछ। तिनीहरूले छिटो ब्याट्री प्याक, समायोज्य सीट उचाइ सामेल र टायर-प्रमाण प्वाल पार्ने काम, टिलर डिजाइन थप गोडा कोठा र स्टीयरिंग व्यवस्थापन अनुमति भनेर। धन्न, ठूलो विनिर्माण निर्भर भएको विशाल कम्पनीहरु मैले देखेको सक्छ के देख्न र नाश भनेर बढ्दो प्रविधिहरू मेरो डर groundless सिद्ध गरेका छन्। हामी प्रारम्भिक चरण त्रुटिहरू सबै मा परीक्षण र यो पनि यसलाई थप अनुसन्धान गर्न हाम्रो समय मोल छ कि छैन हेर्न।
हाम्रो राय वास्तविक बोर्डहरू मा वास्तविक-जीवन अनुभव वर्णन - Koowheel स्मार्ट शेष व्हील तिनीहरूले धेरै सानो हो र यो मिलान डिजाइन किनभने K8 धेरै उपयोगी र समझदार छन्, यो मूल यूएस बजार अनुकूलित छ। एक हात मा, लुकेको ह्यान्डल डिजाइन, सजिलै लगे; अर्कोतर्फ, सडक पाङ्ग्रा डिजाइन, सजिलै आँखा औसत मोडेल बीचमा पकड। यसबाहेक, यो स्लिम र प्रकाश वजन छ।
त्यहाँ वेग नियन्त्रक को प्रकारका धेरै, व्यापक फरक सक्षमता संग छन्। को ब्रेक लगान र प्रवेग पनि सानो सुस्त हुन सक्छ; दुःखको कुरा सवार ब्रेक गर्न वा गर्दा पाङ्ग्रा को वैकल्पिक मार्गमा खोल्दै र मोटर कर्षण curtailing सुस्त आफ्नो क्षमता र वेग अप गुमाउने गति। तर Koowheel बिजुली hoverboard K8 अधिकतम गति मोटर गति 10km / घन्टा, अलार्म बजर चेतावनी को सेटिङ चेतावनी गति पुगेपछि, 10km / घन्टा किनभने विशेष छ; तल गति सीमा यो जब (मूल्य सेट: 10km / घन्टा), चेतावनी बजर छैन अलार्म गर्छ। त्यसैले यो धेरै सुरक्षा अन्य साधारण स्कूटर तुलना गरिएको छ। तपाईं बारेमा पनि समसामयिक ब्रेकिंग गर्न छिटो चिन्ता छैन।
साँच्चै सबै फारममा एक र तैपनि राम्रो सवारी! तपाईंको यात्रा सुरु गर्न सबै यो गर्न अवश्य हो एक खुट्टा संग मा कदम र चमक गर्न मिसिन को प्रमुख मा नेतृत्व प्रकाश गर्न तत्पर छ। यस कारण बजार मा विभिन्न कम्पनीहरु निर्माण गर्न कटिबद्ध छन् आत्म सन्तुलन स्कूटर । तपाईं कसरी एक बुझ्ने अघि बिजुली स्केटबोर्डकाम, तपाईं के तपाईं यसलाई बनाउन प्रयोग बुझ्न हुनेछ। मूलतः 3-डी प्रविधी को विशाल मात्रा वासस्थान प्रयोग संग प्रतिमान हुनेछैन भनी, यो को अनुहार मा। मुद्रण मिडिया निस्सन्देह स्थानीय घर भित्र साथै उचित, साफ गरिनेछ। छिटो यो जान्छ, राम्रो स्थिरता राख्न; हामी जाने ढिलो, यो रकम राख्न गाह्रो धेरै मा उत्तेजित गर्दछ। तथापि, माथिल्लो तपाईं चलान भोल्टेज, को costlier यसलाई प्राप्त हुनेछ। त्यो उत्पादन सरकार-नियमन सुरक्षा परीक्षण, विद्युत र ब्याट्री, चार्जर कार्यक्रम को मूल्यांकन मार्फत भएको छ र सुरक्षित हुन सिद्ध छ भन्ने हो।